ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
Nobel laureate and Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi (L) meets with Japan's Prime Minister Shinzo Abe at Abe's official residence in Tokyo on April 18, 2013. Suu Kyi is in Japan onaseven-day visit. AFP PHOTO / POOL
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့မှာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေးတို့ ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံက ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေး အလေးပေး ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဂျပန်သတင်းတွေက ရေးပါတယ်။ မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က အလစ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေးက ပြစ်တင် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး တာရို ကိုနိုက ဂျပန်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုရော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကိုပါ အရေးပေါ်အကူအညီအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် ထောက်ပံ့မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဂပြနျဝနျကွီးခြုပျ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေး
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ မနီလာမွို့မှာ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဂပြနျဝနျကွီးခြုပျ ရှငျဇို အာဘေးတို့ ဒီနေ့ နိုဝငျဘာ ၁၄ ရကျမှာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျ အကပျြအတညျး ဖွရှေငျးရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဂပြနျနိုငျငံက ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရေး အလေးပေး ဆှေးနှေးဖှယျရှိတယျလို့ ဂပြနျသတငျးတှကေ ရေးပါတယျ။ မွနျမာလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှကေို ARSA အကွမျးဖကျအဖှဲ့က အလဈတိုကျခိုကျမှုနဲ့ ပတျသကျလို့လညျး ဝနျကွီးခြုပျ အာဘေးက ပွဈတငျ ပွောဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလက ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေညေီလာခံမှာ ဂပြနျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး တာရို ကိုနိုက ဂပြနျအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကိုရော ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျကိုပါ အရေးပျေါအကူအညီအဖွဈ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄ သနျးကို နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးတှကေတဆငျ့ ထောကျပံ့မယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
Previous articleပုသိမ်မှာ အဆောက်အဦး ဖြိုချစဉ် အလုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံး
Next articleငပလီကမ်းခြေက အအေးခန်းနဲ့ ငါးခြောက်စက်ရုံတချို့ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အတွက် ပိတ်သိမ်း(ရုပ်/သံ)